Fibreglass mesh, Fibreglass ntambo, Fibreglass Window Screen - Huili
Iteyiphu ye-fiberglass yokuzimela
Ifestile yeFestile engenasici
Wuqiang County Huili fiberglass Co. Ltd, yasungulwa ngo-2008, kwaye ibekwe wuqiang okwilizwe, Hengshui, Hebei China. Isiseko enkulu ukuvelisa fiberglass window screen.With iminyaka zophuhliso, iye yaba yinto lweshishini ehlanganisiweyo kunye nophando nophuhliso, imveliso, intengiso, kumazwe angaphandle kunye nentsebenziswano. Nge koomatshini ukuhlolwa ilaphu elikhulu, oomatshini ekubumbeni kunye neminye ephambili kwimveliso naphakathi izixhobo.
Fibreglass Fly Screen
Fibreglass Fly screen ephothiweyo ukusuka PVC camera ifayibha eyodwa. Fibreglass inambuzane yesinambuzane yenza izinto ezifanelekileyo kwizakhiwo zorhwebo nezolimo ukugcina kude iimpukane, iingcongconi kunye nezinambuzane ezincinci okanye ngenjongo yomoya. Olona hlobo luqhelekileyo lweescreen zeefestile zenziwe ngesinambuzane screen ma ...
Akukho-Bona-Um I-Fiberglass Insect Screen
I-No-See-Um Fibreglass Insect Screen Iscreen esilukiweyo se-fiberglass yezinambuzane isetyenziselwa ukulwa neempukane ezincinci kunye neengcongconi, ngefuthe lokungaboni. Ikwabizwa ngokuba yi-Invisct Insect Screen okanye iWindows Window engabonakaliyo. Isikrini sezinambuzane se-No-see-um fiberglass ikakhulu ngumbala wamalahle. Umthunzi omnyama uhamba ...